सबै विमानस्थलको सुरक्षा जाँच मा, हवाई यात्रा समयमा प्रतिकूल घटनाहरु देखि मालिकहरू रक्षा गर्न जो कागजातहरू को मात्र होइन प्रमाणिकरण, तर पनि अन्य प्रक्रियाहरु समावेश, बाहिर छ। तिनीहरूले धेरै समय लिन खातामा लिएर तपाईं अग्रिम विमानस्थलमा राम्रो मा आइपुग्दा गर्नुपर्छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प - 2-4 घण्टा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पठाउनु पूर्व, र घरेलू उडान 1.5 घण्टा न्यूनतम।
राज्य परे गुजर गर्नेहरूले विमानस्थलमा पासपोर्ट नियन्त्रण पारित। मनमा राख्न धेरै उडानहरू को प्रस्थान नियन्त्रण पट्टी अगाडि एक विशाल लाम गठन गर्दा, र तपाईं प्रस्थान अघि धेरै समय अझै छन् पनि भने, सुरुमा यो सबै गएका गर्नेहरूलाई सोध्न सक्छ।
यसलाई विमानस्थलमा राहदानी नियन्त्रण मा जाँच गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई रुचि राख्नुहुन्छ। पहिलो अधिकारी रूस देखि प्रस्थान को वैधता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बैंकिङ्ग संस्थाहरू वा राज्य एउटा ठूलो ऋण संग एक व्यक्ति, विदेश यात्रा योग्य छैन।
एउटै नियम जो व्यवस्था संग गम्भीर समस्या ती लागू हुन्छ। यात्रा प्रतिबन्ध आपराधिक रेकर्ड, रूपमा राम्रोसँग खुला रूपमा प्रवर्तन कार्यवाही संग नागरिकहरु मा लगाएको।
राहदानी नियन्त्रण Subtleties
ज्ञात छैन - अनुभव बिना यात्री प्रक्रिया जाँच गरीएको छ जो हवाई मा राहदानी नियन्त्रण पारित गर्न डराउँछन्। राहदानी नियन्त्रण सर्तहरू अपवाद बिना सबै लागू:
तपाईं पोस्ट नजिक छैन आउन सक्नुहुन्छ। रातो रेखा अगाडि रहनुपर्छ, यो लाइन रूसी सीमाना छ। यो उलङ्घन गरेको छ जो एक मानिस, सजाय गर्न सकिन्छ।
धेरै पर्यटकहरु धेरै भ्रमित Gaze कर्मचारी राहदानी नियन्त्रण, चिन्ता र टाढा हेर्न सीमा गार्ड पासपोर्ट मा एक फोटो अगाडि अनुहार गर्ला रूपमा कुनै आवश्यकता छैन हो।
मात्र कागजात जाँच गर्न सक्दैनौं, तर पनि विभिन्न प्रश्नहरू सोध्न कागजातहरू विमानस्थल कार्यकर्ता को निरीक्षण को खण्ड संग। आवश्यकता पूरा स्पष्ट र ध्यानपूर्वक गर्न, मजाक र यो मामला मा विडंबना अनुपयुक्त छ र समस्या गर्न सक्छ।
यस यात्री प्रश्न एक सीमाना गार्ड, एक विदेशी भाषामा दिइएको, उदाहरणका लागि बुझ्न गर्दैन भने, आगमन मा निरीक्षण समयमा, यो आवश्यक कुनै पनि मामला मा, यो बारेमा बताउन गर्न पूरा गर्दैन किनभने यो यस्तो इन्कार रूपमा समस्या निम्त्याउन सक्छ "देखिन्छ" राज्य मा प्रवेश।
मनमा राख्न भनेर हात सबै आवश्यक कागजात र भिसा मा एक पर्यटक, प्रवेश मा राहदानी नियन्त्रण कर्मचारीहरु यस को लागि एक राम्रो कारण छ जहाँ एक देश बाहिर एक व्यक्ति राख्न हरेक हक पनि भने। देश मा रहन र एक पर्यटक भिसा मा काम प्राप्त गर्न - उदाहरणका लागि, यो आगमन लागि वास्तविक कारण आशङ्का गर्न सकिन्छ।
यो एक साधारण नियन्त्रण प्रक्रिया हो - सबै भन्दा देशहरूमा, कागजात प्रविष्टि र निकासमा को निरीक्षण किनभने तर, धेरै चिन्ता छैन।
कसरी विमानस्थलमा राहदानी नियन्त्रण मार्फत जाने
पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा पठाइएको गर्नेहरूलाई, यो त्यहाँ फरक क्रममा राखिएको गर्न सकिन्छ भनेर नियन्त्रण धेरै प्रकार हो भनेर थाह आवश्यक छ, तर एउटा तरिका वा अर्को, तिनीहरूले जाने छ।
यस्ता परीक्षा ठाउँ लिन सक्छ किनभने यात्रु, नोटिस भन्सार नियन्त्रण प्रक्रिया दुर्लभ छ। घोषणा गर्न केही भएका सबै ती, बस "हरे गलियारे" मा जानुहोस्। कि "रातो गलियारे" छन् केही कुराहरू व्यवस्था गर्न आवश्यक गर्नेहरूलाई। बरु बस विशेष फ्रेम मार्फत विमानस्थल कर्मचारी द्वारा पास स्क्रीनिंग को "हरे गलियारे" यात्री मा। भन्सार नियन्त्रण प्रस्थान मा र आगमन मा बाहिर गर्न सकिन्छ। आफ्नै पहल निरीक्षण सेवा कर्मचारी कुनै पनि यात्री जाँच गर्न सक्छन्। रूसी विमानस्थलको यो सामान्यतया यस्तो चीन रूपमा व्यापार देशका आइपुगेपछि यात्री जाँच, धेरै विरलै हुन्छ। सीमा निरीक्षण मार्फत पारित गरेपछि, तपाईँले Sheremetyevo विमानस्थलमा राहदानी नियन्त्रण, वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट जान सक्नुहुन्छ।
पहिले प्रस्थान राहदानी नियन्त्रण
अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रस्थान यात्री, बानी नियन्त्रण, तर पासपोर्ट मात्र छैनन्। यो प्रक्रिया मात्र गर्ने राज्य को सीमा बाहिर जाने यात्रुहरू लागि मान्य छ। तर, सबै पर्यटकहरु विमानस्थलमा पासपोर्ट नियन्त्रण र प्रक्रिया संग थप अपरिचित कसरी पारित गर्न थाहा छैन।
राहदानी नियन्त्रण को प्रक्रिया
यात्री निम्न गर्नुपर्छ:
जहाँ विमानस्थल अधिकारीहरु आफ्नो कागजात जाँच विशेष विन्डो, गर्न आउने यात्री बारी गर्न।
यो यात्री पासपोर्ट को मूल, साथै मागका कर्मचारी अनुगमन कागजातहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ वा बोर्डर सेवा एक बोर्डिङ टिकट देखाउन आवश्यक छ।
कागजात कुनै पनि समस्या छैन भने र सबै क्रममा छ, व्यक्ति उल्लंघन बिना राहदानी नियन्त्रण पारित गरेको छ कि certifying, stamped। यो कुनै समस्या पहिचान गरिएको छ किनभने उहाँले राज्य सीमाना पार गर्ने अधिकार छ भन्ने हो।
अवस्थित सीमाना सेवाहरूको यसको आफ्नै नियम द्वारा आयोजित प्रत्येक देशमा विमानस्थलमा राहदानी नियन्त्रण, तर कुनै पनि मामला मा, यात्री कागजात चेक-मा सबै कदम को खण्ड मा stamped हुनुपर्छ।
बच्चाहरु संग यात्रा airfare
अनुभवहीन यात्री, बच्चाहरु संग यात्रा, 14 भन्दा कम वर्ष को लागि, उडान एक धेरै डरलाग्दो घटना हो। तथापि, रूपमा जटिल छैन ती यात्रु लागि विमानस्थलमा पासपोर्ट नियन्त्रण यसलाई पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा। छोराछोरी संग एक व्यापार यात्रा मा विदेश जाने जो पर्यटकहरु, तपाईं निम्न कागजातहरू हुनुपर्छ:
विदेशी बच्चा पासपोर्ट, एक स्वीकृत ढाँचा अनुसार निर्मित।
टिप्पणी र बच्चाको फोटो संग अभिभावक को अन्तर्राष्ट्रिय राहदानी।
मूल जन्म प्रमाणपत्र बच्चा।
पहिले नै 14 वर्ष छ जो बच्चा, विमानस्थलमा पासपोर्ट नियन्त्रण स्वतन्त्र चल्छ। जब तपाईं बाहिर पठाउन एक अभिभावक संग राज्य अन्य अभिभावक बाट बच्चा छोड्ने notarized अनुमति तयार हुनुपर्छ। यो कागजात मात्र घरेलू उडान कागजात आवश्यक छैन मा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा को लागि आवश्यक छ।
सुरक्षा नियन्त्रण - नियन्त्रण अर्को प्रकार धेरै यात्रु संग मनपर्ने छैन। यो प्रक्रिया एक नोटबुक, पानी बोतल हटाउन बाहिर लिएर र हात हुर्काउन, लुगा र महिला लागि एडी हटाउन पनि समावेश छ।
preflight - सबैभन्दा विमानस्थलको मा, सुरक्षा जाँच त्यहाँ एउटा मात्र छ। रूस मा, उदाहरणका लागि, पहिलो चेक बित्दै र विमानस्थल निर्माण गर्न प्रवेश थप, यो रूपमा राम्ररी, तर पनि महत्त्वपूर्ण छ।
विमानस्थलमा निरीक्षण को आधुनिक स्कोप संग सुसज्जित छ भने preflight सुरक्षा नियन्त्रण सुविधाहरू प्लास्टिक बक्स मा जो तल धातु वस्तुहरु, उपकरण, तरल त्यसैले राख्नु, र। एन, तपाईंले आफ्नो जूता हटाउन आवश्यक हुनेछ। सुसज्जित उन्नत प्राविधिक उपकरण संग टर्मिनलहरु, मा, त्यहाँ बोतल सामग्रीहरू पहिचान गर्न सक्षम एक सेटिंग, त्यसैले पानी, रस र सोडा पूरा गर्न, र परीक्षा तिनीहरूलाई बिसाउन गर्न मौका छ। साधारणतया जब तपाईं निम्न कुराहरू संग सुरक्षा नियन्त्रण छोड्ने छ:
100 एमएल को एक आवाजमा बोतल;
ठूलो र सानो कैंची संग;
एक पेच संग।
तपाईं बाल क्लिप, जार, स्मृति चिन्ह र यति मा, बस निरीक्षण गरेर जस्तै कुराहरू एक झोला फेला र यात्री फर्के भने।
प्रक्रियाहरु खोजी गर्न नडराऊ, तिनीहरूले तपाईंको आफ्नै सुरक्षाको लागि आवश्यक छन्। अग्रिम राम्रो विमानस्थलमा आइपुग्दा र त्यसपछि उडान आनन्द! आफ्नो छुट्टी आनन्द लिनुहोस्!
एमिरेट्स एयरलाइन जमीन र हावा सान्त्वना सुनिश्चित
रूसी वाहक Ikar एयरलाइन्स
Bibi Byuell - जीवनी र काम
पौडी। पौडी स्तर।
आर्मेनियाली फिर्ता brandies
नियम: थप, सबै भन्दा खाने
बाँकी र लामो रहन को लागि सस्ता देश के हो
भाइरल केराटाइटिस: लक्षण र उपचार
लुसिया: मान, प्रकृति र भाग्य को नाम